Martin Wimpress Anozivisa Iye Achakurumidza Kurega Canonical | Linux Vakapindwa muropa
Martin Wimpress anozivisa kuti ichakurumidza kusiya Canonical, asi ichaenderera nekuvandudza Ubuntu MATE
pablinux | | Updated on 02/02/2021 21:41 | Noticias
Kwandiri, Ubuntu hwaApril 2011 switch kubva kuGNOME kuenda kuUniity zvaishungurudza. Ini ndinorangarira kuti panguva iyoyo ini ndanga ndichishandisa "netbook", ndokuti, imwe yeaya madiki uye akaganhurirwa malaptop uko Ubuntu 10.10 yakashanda zvakaringana, asi mwedzi mitanhatu gare gare ndakatadza kana kuishandisa. Ndipo pandakatanga kuyedza dzimwe nzira, uye ini ndanga ndichishandisa Linux mint kusvika Martin Wimpress ndakafunga kuti yaive zano rakanaka kudzosa iyo yakasarudzika Ubuntu desktop.
Muna Gumiguru 2014, mugadziri akaburitsa vhezheni yekutanga ye Ubuntu MATE, uye ndiko kwandainyanya kugovera kwamakore akati wandei, kudzamara mamwe mabhugi mu laptop yangu (ruzivo rwemunhu), akaita kuti ndidzokere kuUbuntu, asi ndatova mu15.6-inch apo iko kuita kwacho kwanga kusiri kwakaipa kudaro. Nguva pfupi yapfuura, yatove muna 2015, Canonical yaisanganisira Ubuntu MATE sechinhu chepamutemo, uye ndiyo yaive nguva Martin Wimpress paakatanga kuve chikamu chechikwata chekambani inotungamirwa naMark Shuttleworth.
Martin Wimpress acharamba achive chikamu chemhuri, asi aine mukurumbira mushoma
Mumakore apfuura, Wimpress anga achishanda munzvimbo dzakasiyana kuCanonical. Kune rimwe divi, ndiye anotungamira anovandudza Ubuntu MATE; kune zvimwe, anga ari kumberi kana kutungamira desktop yeUbuntu, kusvika padanho rekuve iye iye anga ave nebasa rekuburitsa nhau zhinji dzine chekuita neprojekiti, senge shanduko musoftware uye tweaks mukugadzirwa. Zvese izvi zvichaguma nekukurumidza.
Izvi ndizvo zvaachangobva kutaura pasocial network Twitter:
Ini ndirikukurumidza kusiya Canonical. Ndiri kufara kwazvo kuve kujoina vanhu vakanaka @SlimDevOpsKunyangwe paine shanduko, ini ndicharamba ndichitungamira @ubuntu_mate; ndiko kuda kwangu? chirongwa. Nomuzvarirwo, ini ndinoramba ndichishingairira #Ubuntu & Snapcraft nharaunda inotsigira?
- Martin? Wimpress (@m_wimpress) February 2, 2021
Munguva pfupi inotevera ndichave ndasiya Canonical. Ndiri kufara kwazvo kujoina vanhu vakanaka ku @SlimDevOps. Kunyangwe paine shanduko, ini ndicharamba ndichitungamira @ubuntu_mate; ndicho chido changu chekuda. Nomuzvarirwo, ini ndichaenderera mberi kuva #Ubuntu anofarira uye mupi munharaunda yeSnapcraft.
Pamusoro pekuenderera mberi nekushanda paUbuntu MATE, iyo yaanotsanangura sekuda kwake, iye acharamba achingove anofarira Ubuntu uye Snapcraft nharaunda inopa, ndiko kuti, zve software ine chekuita neCanonical's Snap mapakeji.
Uye irikuenda kupi? Zvakanaka ku slim.ai, chii chirongwa chine chinangwa chekugadzira maturusi ekubatsira kugadzira zvigadzirwa zvekugadzira nekukurumidza. Ini pachangu, handikwanise kutaura kuti ndicho chinhu chinondinakidza kunyanya, asi ndinofunga chichavandudzika nekuuya kwemusimudziri uyo akandiita kuti ndidzokere kuUbuntu mushure mekuyedza kugoverwa kwakawanda zvichienderana neCanonical system, pakati payo pandinoyeuka kuti paive zvakare yekutanga OS. Chero chii chinoitika, rombo rakanaka, Martin.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Martin Wimpress anozivisa kuti ichakurumidza kusiya Canonical, asi ichaenderera nekuvandudza Ubuntu MATE
Ini ndinofunga vazhinji vashandisi veLinux vanoshandisa mamwe ma distros nekuda kweinodhura posvo yekuvandudza. MATE haana kunyanya kujeka kana kutsvinda, ingori fungidziro iyo VaWimpress vakashandisa. Pasina kupokana, nharaunda yako ine hutano, sedzimwe dzakawanda idzo dzichangobva kugadzirwa, uye rega ienderere mberi.
Docker Docker Docker kwese kwese !! : /
Clonezilla Live 2.7.1 inouya neLinux 5.10.9, zvigadzirwa zvekushandisa uye nezvimwe
Firefox Desktop Inozivisa Hapana Zvirongwa Zvezvino zvePWA Tsigiro